Himalaya Dainik » सौन्दर्यको प्रतीक फूल मन नपराउने को होला ?, फुल्यो सुनाखरी तर हेर्न कोही आएनन् !
सौन्दर्यको प्रतीक फूल मन नपराउने को होला ?, फुल्यो सुनाखरी तर हेर्न कोही आएनन् !
लहान । सौन्दर्यको प्रतीक फूल मन नपराउने को होला ? त्यसमा पनि वर्षको एक दिन मात्र फक्रिने त्यो फूल जसलाई श्रद्धा र भक्तिले हेर्ने गरिन्छ।
कौतुहलताका साथ साताअघि नेपालको मात्र नभई छिमेकी मूलुक भारतबाट हजारौ आगन्तुक आउने त्यो फूल यस वर्ष पनि फुलेको छ। तर, हेर्न अगन्तुक आएका छैनन्। सुनसान फूलबारीमा फूल आगन्तुक टोलाउँदै फक्रिरहेको छ।
प्रकाशित मिति १० जेष्ठ २०७७, शनिबार २१:०५